DE30EUR oovimba-Funda ukuRhweba
I-NASDAQ 100 (100) ifikelela kuMmandla oThengiweyo oPhezulu, unokujamelana nokuchaswa
I-NAS100 isekwicala elihamba ngezantsi kwenqanaba le-15200 ukusukela ngoJulayi. Nge-Agasti, abathengi baphinde bayiphinda indawo yokuchasana kabini kodwa bagxothwa. Nge-17 ka-Agasti ka-Agasti, i-NAS100 yawela kwinqanaba le-14800. Namhlanje, abathengi batyhala ixabiso kwindawo yokumelana. Okwangoku; Ngomhla wama-26 kuJulayi uptrend umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokubuyiselwa kwakhona kweFibonacci engama-61.8%. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-NAS100 inokuthi inyuke iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci okanye kwinqanaba le-15553.79.
I-NAS100 ikwinqanaba lama-57 lexesha laMandla aHlanganisiweyo 14. Ibonisa ukuba imakethi ikwindawo yokuqhubela phambili kunye nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50.
I-NASDAQ 100 (NAS100) yeXesha eliPhakathi leNdlela: Ukulinganisa
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sikukuhamba ecaleni kwinqanaba elingaphantsi kwenqanaba le-15200. Nge-19 ka-Agasti, i-NAS100 yehla kwinqanaba le-14720 yaphinda yaqala phezulu. Okwangoku; Nge-19 ka-Agasti uptrend umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa inqanaba lokuphinda kubuyiselwe i-Fibonacci 61.8%. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-NAS100 inokuthi inyuke iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci okanye kwinqanaba le-15553.79.
I-NASDAQ 100 ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba imarike ifikelele kwingingqi ethengwe ngaphezulu. Abathengisi kusenokwenzeka ukuba bavele, ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-50 zithambeka ngokuthe tye zibonisa ukuhamba ecaleni.
Isalathiso se-NAS100 sikwi-bullish umfutho kwaye kuyarhweba kwinqanaba le-15123 ngexesha lokubhala. Isalathiso sifikelele kumda wokuchasana nokwaliwa. Ngaphandle koko, isalathiso sifikelele kummandla othengiweyo wentengiso.
IJamani 30 (DE30EUR) ibuyela emva emva kokufikelela kwingingqi esebenzileyo kwinqanaba le-14150
Ukuhlaziywa: 11 January 2021
IJamani i-30 inyukela phezulu kodwa ijongene nokuchasana kwinqanaba le-13800. Ukusukela nge-8 kaJanuwari isalathiso sifikelele kwingingqi ethe kratya yentengiso. I-RSI ibonakalisile ukuba isalathiso asinandawo yokuhlangana phezulu. IJamani i-30 isenokuphinda ibuye kwakhona ukusuka kutshanje.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso ukuya phezulu sijamelene nokuchasana kwinqanaba le-14100. Imakethi sele iwele kwinqanaba le-13860. Ngomhla kaJanuwari 11 ezantsi; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukuphinda kubuyiselwe endaweni kubonisa ukuba i-DE30EUR iya kuwa kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo. Owona mgangatho usezantsi ngu-13559.90.
I-DE30EUR inyukele phezulu. Isalathiso sibuyela umva ukusuka kutshanje. I-RSI ibonakalise ukuhla kwexabiso. Ngokuya kuhlalutyo lwezixhobo zeFibonacci, isalathiso siya kuwa kwinqanaba le-13599.90.
IJamani 30 (DE30EUR) iyaqhubeka nokuPhakama, kwinqanaba lokujolisa kwi-14518.60
Ukuhlaziywa: 4 January 2021
IJamani i-30 inyukele phezulu kodwa ijongene nokuchasana kwinqanaba le-13800. Ngomhla we-17 kuDisemba, umzimba wekhandlela obuyise umva kuvavanywa ukubuyiswa kwe-Fibonacci eyi-50%. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba isalathiso siya kunyuka siye kwinqanaba le-2.0 yokwandiswa kweFibonacci. Oko kukuphakama kwe-14518.60.
Okwangoku, ii-SMAs zithambekele phezulu zibonisa ukuba phezulu. Isalathiso sikwinqanaba lama-60 leSalathiso saMandla esiNxulumene nesiKhokelo sexesha lama-14. Oku kubonisa ukuba sikummandla ophakamileyo kunye nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sikukunyuka okuphezulu. Ngomhla wama-28 kuDisemba uptrend, umzimba wekhandlela owabuyisa umva wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci eyi-78.6%. Ukubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-DE30EUR iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.272 yolwandiso lweFibonacci kunye nokubuyela umva. Yiyo ephezulu ye-14060.0.
I-DE30 EUR-4 Itshathi yeYure
Iimarike zingaphezulu kwe-40% yoluhlu lwemihla ngemihla. Ibonisa ukuba isalathiso sikwi-bullish umfutho. Okwangoku, ii-SMA zeentsuku ezingama-50 kunye neentsuku ezingama-21 ze-SMA zitshibilika zisiya phezulu zibonisa uptrend.
I-DE30EUR inyukele phezulu. Ukunyuka okuphezulu kujongene nokwaliwa kwinqanaba lokumelana ne-13800. Ukuqhawuka kokuchasana kuya kutyhala isalathiso ukuze uqalise kwakhona ngokutsha. Ngokuya kuhlalutyo lwezixhobo zeFibonacci, isalathiso siya kunyuka siye kwinqanaba le-14518.60.
Uqikelelo lonyaka kwiJamani 30 (2021): I-DE30EUR ilindele ukuqhubela phambili kwiBullish Momentum ngo-2021
Ukuhlaziywa: 29 Disemba 2020
Iindawo eziManyeneyo eziPhambili13600, 14000, 14400
Kwikota yokuqala ye-2020, isalathiso sasisezantsi. IJamani 30 inebhalansi yokuvula ye-13156.20. Ukusukela ngoJanuwari, isalathiso saphazamiseka ukuya kwinqanaba 7957, 60 ngo-Matshi. Iinkunzi zithenga idiphu njengoko imarike iphinde yaqala ukunyuka ngo-Epreli.
Uhlaziyo lwaphinda lwaqala ngo-Epreli kodwa lwapheliswa ngo-Agasti. Isalathiso sijongane nokuchasana ngo-Agasti. NgoSeptemba nango-Okthobha, imarike yahlangabezana nokunye ukuhla. IJamani i-30 ifunyenwe ngo-Novemba njengoko intengiso yafikelela kwindawo ephezulu ye-13815.60 ngoDisemba.
I-DE30EUR -Itshathi yenyanga
IJamani 30 (DE30EUR) Uqikelelo lwamaxabiso: Itshathi yenyanga
I-uptrend yayiyirali ethe nkqo. I-rally yokuqala yaphela ngo-Agasti kodwa kwabakho ukuphazamiseka okwavavanya umgca wokuhamba ngo-Okthobha. Ukuthatha umgca wendlela wophulwe ngo-Okthobha; uptrend ngewuyekisiwe.
IJamani 30 (DE30EUR) Uqikelelo lwamaxabiso: Itshathi yeeveki
Apha, uptrend awukho kwindibano ethe nkqo. Isalathiso sifikelele kwinqanaba eliphezulu le-13000 kwaye saqala kwakhona ukuhamba ecaleni. Ukuhamba kwecala kwagqitywa njengoko iinkunzi zeenkomo zaphula inqanaba le-13000 ukuze ziphinde zinyukele phezulu. Ukuqhubeka kuqhubeka.
Ngo-2020, iJamani i-30 yachacha ekonakaleni kwasekuqaleni kwikota yokuqala yonyaka. Uprerend wangoku ugqithile kwiminyaka edlulileyo. I-RSI ikwinqanaba lama-59 elicebisa ukuba isalathiso sinegumbi elaneleyo lokuhlangana phezulu.
Phawula: U-Learn2.Trade akangomcebisi wezezimali. Yenza uphando lwakho ngaphambi kokuba utyale imali yakho kuyo nayiphi na iasethi eyimali okanye imveliso ebekiweyo okanye umsitho. Asinaxanduva lakho
iziphumo zotyalo mali
IJamani 30 (DE30EUR) Ukujongwa kobuso, ukuHamba ngokuHlangayo kusenokwenzeka
Ukuhlaziywa: 22 Disemba 2020
IJamani i-30 inyukela phezulu kodwa ijongene nokuchasana kwinqanaba le-13800. Ixabiso liye laphosa kwinqanaba le-13000 kwaye labuyela umva. Kubonakala ngathi kukho uxinzelelo lokuthenga kwinqanaba lamaxabiso asezantsi.
Okwangoku, ii-SMAs zithambekele phezulu zibonisa ukuba phezulu. Isalathiso sikwinqanaba lama-55 leSalathiso saMandla esiNxulumene nesiKhokelo sexesha lama-14. Oku kubonisa ukuba sikummandla ophakamileyo kunye nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sisezantsi. Umzimba wekhandlela obuyiselwe umva wavavanya inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-61.8%. Ukuphinda kubuyiselwe endaweni kubonisa ukuba i-DE30EUR izokwehla ukuya kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci eyandisiweyo.
I-DE30EUR ikukuhla ezantsi. Ukunyuka okuphezulu kujongene nokwaliwa kwinqanaba lokumelana ne-13800. Ukuqhawuka kokuchasana kuya kwenza ukuba ingqekembe iphinde iqhubeke kwakhona.